Izintandokazi ebuntwaneni peach fresh kube luqhatshi akhethekile ukunambitheka obucayi, likhula ezindaweni aseningizimu ne sezulu ngokulinganisela efudumele. Okwazalelwa mlando lesi sithelo emangalisayo, ososayensi bakholelwa izingxenye enkabeni nasenyakatho yeChina, lapho namuhla ungathola alimondi zasendle igama elifanayo.
Kusukela China amnandi futhi izithelo namanzi bathuthela le izingadi ipharadesi yasePheresiya, amaGreki ke esekhulile. Ekhulwini le-16, kwaba injabulo waqala ukuhlakulela e-Europe, e ezifundazweni eziseningizimu ye-Ukraine neRussia, okwakubizwa ngokuthi i "apula Persian".
izakhiwo awusizo kanye contraindications yokusetshenziswa kwawo kwakwaziwa abaphulukisi Chinese ezikhathini zasendulo. Ukuze umphumela oqabulayo "izinkulungwane izifo," wabizwa ngokuthi ngalezo zinsuku "izithelo imperial" ifanekisela impilo nokuphila kade le nqaba. Ekuqaleni kwawo-enkulungwaneni wesine balimi Chinese baba nekhono eyaziwayo elimnandi esinamanzi peach izithelo ukunikeza amandla okuphila okuphulukisa umuntu ukuqunjelwa, ukuntuleka kwegazi emzimbeni, kanye nesifo senhliziyo.
Ngaphezu izithelo, imithi kanye nehlukile isasetshenziswa peach izimbali namaqabunga. Kuyinto kabanzi izimonyo, imithi, uwoyela umkhakha ukudla sicindezelwe kusuka imbewu amapentshisi. Modern ubuhle umkhakha ulisebenzisa izindlela cellulite. A massage ngamafutha peach imigodi kuvusa umzimba, isiza kanjani ukulwa ne wazonda amafutha ongama bese kakhulu ngcono ukubukeka kwesikhumba, wasinikeza a soft kanye Velvety.
Kuyini, peach emangalisayo? izakhiwo awusizo kanye contraindications ekusetshenzisweni amnandi inyama namanzi
Lokhu isithelo Rosaceae izihlahla, libalele futhi namanzi, kanye zimnandi sweet and omuncu ukunambitheka ezimnandi - njengenombolo sawubona efudumele kusukela eningizimu, mhlawumbe velvet, embozwe ezihlukahlukene Lint okuthambile, okushelelayo (ibizwa ngokuthi nectarines) noma: Peach. Ngaphakathi, inyama peach imvelo amaKhaladi omhlophe noma ophuzi, owolintshi noma obomvu. ebusweni Peach kwenzeka njengoba ophuzi, obomvu, ezinemibala egqamile aphuzi-bomvu noma neqondayo, nephuzi. Izithelo ngaphakathi unikezwe ithambo elikhulu, embozwe, uginindela egcwele anemifantu ejulile fetus. Peach isisindo ziyahlukahluka kusuka 150-200 g futhi zezinhlobo ezinkulu ikakhulukazi enesisindo 500 amagremu!
ukusetshenziswa oqabulayo ezivuthiwe peach izithelo
Sebenzisa zamapetshisi, izakhiwo ewusizo kanye contraindications aziwa isikhathi eside njengoba dessert wezokudla. calorific yaso kusukela 44 kuya 48 kcal 100 g ngalinye, futhi 200 ml peach juice iqukethe kcal 60 kuphela Ithuluzi enhle ukudla ngaphandle kokuba kudingeke sikhathazeke mayelana amayintshi extra okhalweni! Ngaphezu kwalokho, izazi zokudla zesimanje ziye ukuqinisekisile ukuthi ukudla akukho kuka 3-4 fresh peach izithelo ngosuku phakathi nenkathi ka yokuvuthwa, kungaba ngokuphawulekayo postroynet kanyekanye bazogcwalisa umzimba nge amavithamini amaningi nenzuzo, amaminerali, acid organic, carotene, pectin kanye amafutha abalulekile. Peach kuyinto okune-fibre, ekuthuthukiseni wamathumbu motility, i-potassium, kuqinisa imithambo yegazi kanye senhliziyo esilimele, magnesium, phosphorus, i-manganese, ithusi, selenium ne-zinc. Lezi zithelo Kunconywa ukudla abantu asidi eliphansi esiswini, ukuntuleka kwegazi emzimbeni, arrhythmias, ethole noma iyiphi ukucindezeleka noma ukuhlinzwa.
Ubani omunye ubonisa amapentshisi? izakhiwo awusizo ngesikhathi sokukhulelwa kungabangela ukukhubazeka ngcono isimo sempilo sabesifazane nabo ukususa izimpawu ubuthi, ukwanelisa iphango wakho nasekomeni, ngaphandle kokudala umonakalo sibalo, ukuze bathole wonke micronutrients ezidingekayo ukuze abe nabantwana. Magnesium kuyangisiza ukuba ngizinze isimiso sezinzwa, i-potassium - ukuhoxisa uketshezi ngokweqile kanye ukuqeda ukuvuvukala, i-calcium - ukuqinisa amathambo izicubu, phosphorus normalizes uhlelo zemisipha, ukwandisa ezingeni-hemoglobin yensimbi, futhi i-folic acid kubalulekile ekuthuthukiseni ingane esizayo.
Peach : Peach: izakhiwo ewusizo futhi umehluko yayo kusukela ukubukeka okunesithunzi
Lokhu ezihlukahlukene peach edonsela ifomu hhayi kuphela yayo yasekuqaleni, kodwa ukufana ukunambitheka: nenyama white akaphelelwa ubumnandi kusukela kwesikhumba ukuze amathambo. Ngaphezu kwalokho, zenza bahlukana kalula. Calorie: Peach peach kakhulu leliphasi kunaleyo Classic: 30-32 kcal 100 g dessert ezimangalisayo ngamunye!
Ubani okufanele nomkhawulo noma ukubeka ukusetshenziswa amapentshisi?
Lapho yokungezwani komzimba ngabanye, kukhuphuke asidi yesisu, kukhona umlando sikashukela noma ukukhuluphala kudingeka uqaphe mayelana ezifana nama-dessert enkulu efana peach. izakhiwo awusizo kanye contraindications ngokuvamile ezihlobene: nomphumela tonic zalezi zithelo esihlwabusayo juice kuzo kungase kungabi efiselekayo kubantu abane abangothathekile isimiso sezinzwa.
Yiziphi izinzuzo green tea
Bill ruble 10000: amaphrojekthi kanye ngokoqobo. Impikiswano imali yamaphepha entsha e-2017